Wadan Reer Yurub ah oo Madaxawyne u Doortay Gabadh Sharci yaqaan ah, | Biyoguurenews.com
Home Wararka Wadan Reer Yurub ah oo Madaxawyne u Doortay Gabadh Sharci yaqaan ah,
Wadan Reer Yurub ah oo Madaxawyne u Doortay Gabadh Sharci yaqaan ah,
Zuzana Cputova oo u ololeysa ka hortagga musuqmasuqa ayaa ku guuleystay doorashada madaxweynanimada, iyada oo noqotay haweeneydii ugu horreysay oo dalkaasi madaxweyne ka noqota.
Ms Caputova, oo aan habayaraatee khibrad u lahayn siyaasadda ayaa si la yaab leh uga guuleysatay dibloomaasiga caanka ah Ms Maros Sefcovic oo u sharraxnaa xisbiga talada dalkaasi haya, waxayna Ms Caputova guusha ku raacday wareegga labad ee cod bixinta.
Ololaheeda doorashada ayaa waxay u qaabeysay inuu tartanka uu dhex marayo Xumaan iyo Samaan.
Doorashada dalkaasi ayaa imaneysa xilli ay sanad ka soo wareegtay dilkii loo geystay wariyaha caanka ahaa ee Jan Kuciak oo lagu yaqaanno inuu baaritaanno qoto dheer uu ku sameeyo xiriirka ka dhaxeeyo siyaasiyiinta iyo dilalka qorsheysan ee ka dhaca dalka Slovakia.
Ms Caputova waxay sheegtay dilka Mr Kuciak iney ku kalliftay iney go’aansato iney doorashada madaxweynaha ka qayb gasho, oo inta badan doorkiisu yahay mid sharafeed oo aan awood badan lahayn.
Dadki codadkooda ka dhiibtay doorashad dalkaasi 58% waxay codkooda siiyeen Ms Caputova halka Mr Sefcovic uu helay 42%.
Waxayna Ms Caputova oo sharci yaqaan ah ay ku soo caan baxday marki ay hoggamisay dcwad ka dhan ah dowladda oo muddo 14 sano soo socotay.
Haweeneydan hadda loo doortay madaxweynaha dalka Slovakia oo 45 jir ah waxay dhashay laba carruur ah iyada oo ka tirsan xisbiga liberal Progressive Slovakia party.
Waddankasi oo uu aan weli sharci ka ahayn guurka labada jinsi ee isku midka ah iyo crruurta in cid ay dhalin ay korsato, ayaa la filayaa xisbigeeda inuu waxbadan ka beddelo.Musharraxa ay tartamayeen ee Mr Sefcovic wuxuu hayaa xilka madaxweyne ku xigeenka midowga Yurub.
Waxaana musharraxaan soo dhigay oo uu matalayey xisbiga Smer-SD uu hoggaminayey Ra’sal wasaare Robert fico oo xilka iska casilay kaddib dilki loo geystay wariye Kuciak.
Wareegga hore ee codbixinta Ms Caputova waxay heshay 40% halka Mr Sefcovic uu helay wax ka yar 19%.
Previous articleHadalki ugu dambeeyey duuliyihi diyaaradda Itoobiya ee burburtay
Next articleSifaynta Biyaha Ee Somaliland Water Technology Oo Soo Bandhigtay Qalab Loogu Tala Galay Sifaynta Biyaha.